Sihlalutya iNintendo Classic Mini NES kwaye sikuxelele konke ngayo | Iindaba zeGajethi
Sihlalutya iNintendo Classic Mini NES kwaye sikuxelela zonke iinkcukacha [VIDEO]
Ngomhla weshumi elinanye kwankqonkqozwa emnyango, i INintendo Classic yeNES Ifike ngokufika ngexesha njengakuqala, ke yayilixesha lokuhlalutya nganye yeenkcukacha zayo, ukuze abafundi beGadget yeActualidad bafunde malunga nentsingiselo encinci eyabekwa yinkampani yaseJapan ezandleni zakho. Ke ngoko, Sikuzisa i-unboxing epheleleyo kunye nokuphononongwa kweNintendo Classic Mini NES, ukuze ulinganise ukuthengwa kwakho kuye kwelona liphezulu, ubuncinci xa kukho isitokhwe sayo, kuba iiyunithi zokuqala zekhonsoli zithengisiwe, kubangela isiphithiphithi sokwenyani phakathi kwabasebenzisi abenze ukubhukisha kwabo kubasasazi abaziwayo abanjengoMDLALO . Ke, ungaphoswa yividiyo yethu kunye nokuphononongwa kwethu kweNintendo Classic Mini NES, ukuze uyazi kakuhle.
Siza kuqala ngokwamacandelo, kwaye kwindawo yokuqala kufuneka sazi ukuba yintoni iNintendo Classic Mini NES kwaye kutheni ibangele ingqumbo engaka
1 INintendo Classic Mini NES, ukubuya konyana wolahleko
2 Itekhnoloji yale mihla kunye nemidlalo yakudala
3 Ukusetyenziswa okuphantsi kwaye akukho mveliso
4 Uyilo lweRetro kunye nemini, ngokuhlonipha eyantlandlolo
5 Inkqubo yokusebenza inomdla kwaye ivumela umdlalo ukuba ugcine
6 Uluhlu lomdlalo weNintendo Classic Mini NES
INintendo Classic Mini NES, ukubuya konyana wolahleko
Ii-Retro consoles ziyimfashini ngakumbi kunangaphambili, ngakumbi kuba sekudlule iminyaka engama-20 okokoko kukhutshwa okukhulu kwimbali. INintendo ikwazile ukuthatha ithuba elifanelekileyo lokutsala kolu hlobo lwemveliso, kwaye yehla yasebenza ukuze ibonise ukunciphisa, ukusebenza kunye nangaphezulu kwayo yonke inguqulelo ethembekileyo yeNintendo System yeNkqubo yayo. Le yindlela uNintendo Classic Mini NES awasazisa ngayo, Ikhonsoli encinci encinci, nangona kunjalo igcine ubungakanani besilawuli sentsusa ukuze sikwazi ukuvusa iimvakalelo zakudala xa sidlala le khonsoli eyaguqula intengiso ngexesha elinzima kwimidlalo yevidiyo.
Le khonsoli yafika kwimarike ngoNovemba 11 ngexabiso le- € 60, kubangela ukulahleka phantse kwangoko kwesitokhwe kunye nokuhamba okulandelayo kwabaqikeleli kwiiwebhusayithi ezingamasekeni.
Itekhnoloji yale mihla kunye nemidlalo yakudala
Sijongene nengxaki yokuqala xa kuziwa ekuthengiseni le khonsoli njenge-churros, unxibelelwano. I-Nintendo ikwazile ukuyisombulula kakuhle, kunzima ukuba ungayifumani namhlanje umabonwakude ngaphandle koqhagamshelo lwe-HDMI, olona luvo ludumileyo lwevidiyo kunye nevidiyo ngalo mzuzu. Ke ngoko Ndigqibe kwelokuba ndenze ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano lwe-analog kwiNintendo Classic Mini NES, ke uqhagamshelo lweconsole kwindawo yokudlala iya kuba yintambo ye-HDMI eya kuthi ibandakanywe kwibhokisi yeconsole.
Nangona kunjalo, uqhagamshelo lwedijithali luya kusenza ukuba singawuxabisi umxholo ngendlela efanayo neyangaphambili. Kodwa iNitendo ikulungiselele ngokulula oko, njengoko iNintendo Classic Mini NES ibandakanya iindlela ezintathu zevidiyo:
I-CRT: Imowudi eguqulela isikrini kumabonwakude kangangoko kunokwenzeka, ukulinganisa ithelevishini yeetyhubhu
4: 3: Isikrini esikwe kwi-4 yesiqhelo: ubungakanani bophuhliso lwe-3
IPixel egqibeleleyo: Imowudi yomdlalo apho iipikseli zomdlalo wevidiyo zonyuselwa ukubonelela ngamava anamhlanje.
Icacile, ikhonsoli yenzelwe ukudlala kwiCRT okanye kwi-4: 3, ngokoluvo lwam eyona ndlela ivusa ixesha elidlulileyo xa besidlala le khonsoli yiCRT.
Ukusetyenziswa okuphantsi kwaye akukho mveliso
Kuhlelo lwaseYurophu lwekhonsoli asizukufumana iplagi yamandla (iplagi), ikhonsoli iya kuza kuphela ne-microUSB kwikhebula le-USB. Kungenxa yokuba ikhonsoli ifuna amandla amancinci okusebenza, ke nge-USB ebandakanya umabonwakude wethu singadlala ngokuzolileyo. Nangona kunjalo, Inguqulelo yaseNyakatho Melika yekhonsoli ibandakanya ukuphuma kwamandlaI-wink engaqhelekanga esingenakuyiqonda ncam kwiNintendo, ngakumbi kwisixhobo se- € 60, kuthathelwa ingqalelo ukuba neChromecast ebiza kancinci kwaye incinci ibandakanya ukuphuma kwamandla.
Nangona kunjalo, njengoko besitshilo, Ngokudibanisa iNintendo Classic Mini NES kwi-USB kamabonwakude, siya kuba namandla amaninzi ukuze sikwazi ukudlala ikhonsoli. Kuyinyani ukuba siphulukene ne-USB, kodwa ubuncinci iNintendo ibone kufanelekile ukubonelela ngentambo yomgangatho ophawuleka kakhulu kunye nobungakanani obukhulu ukuze singanyanzelwa ukuba sibambelele kumabonwakude xa sifuna ukudlala. Okanye ewe, kwelinye icandelo siza kuthetha malunga nobungakanani bekhebula lokulawula kude, into engasishiyanga sonwabe kakhulu.
Uyilo lweRetro kunye nemini, ngokuhlonipha eyantlandlolo
Uyilo yeyona nto sayithanda kakhulu malunga nekhonsoli, enyanisweni, ukuthandwa kwayo akubanga ngenxa yokuba kubandakanya ukusayina kukaNintendo, umsebenzi olungileyo ohlonipha uyilo lwantlandlolo udunyisiwe ngabo bonke. Ikhonsoli kukuphinda kwenziwe kwakhona kwekhonsoli yeNintendo yoNwabo yeNkqubo., nangona ikhava yekhatriji ingenakuvulwa, ngenxa yezizathu ezicacileyo, kuba asinakho ukubandakanya iicartridge zangaphandle, singadlala kuphela imidlalo ebuyiselwe ikhonsoli. Ikhonsoli ayinkulu kuneenyawo.
Umyalelo ube yinkcukacha emangalisayo, Ihlonipha izinto zeplastiki kunye nemibala, ebonelela ngemvakalelo yokuqina okumangalisayo okungafane kubonwe namhlanje kolu hlobo lwemveliso. Ngelishwa ulawulo lunentambo, inyani kukuba kubandakanya nolawulo olungenazingcingo lwaluya kuba yinkcukacha enomtsalane, nangona mhlawumbi ngeyayenze ukuba ikhonsoli iphulukane nomoya we-retro. Nangona kunjalo, intambo yokulawula kude ikukuhlekisa ngokufutshane, kuphela yi-30cm eya kuba ngaphezulu kokungonelanga kumagumbi amaninzi okuhlala namhlanje, ngakumbi ubukhulu bescreen esiphatha. Ngakolunye uhlangothi, imidlalo emininzi iya kuhambelana nabadlali ababini, ungathenga omnye umlawuli nge- € 10 kwaye iquka ukudibanisa ezimbini.
Inkqubo yokusebenza inomdla kwaye ivumela umdlalo ukuba ugcine
UNintendo wayefuna ukwenza inkqubo ibe lula ngokulula. Ilula kakhulu, xa uqala ikhonsoli, imenyu iya kuvula ngokukhetha kunye noluhlu lwemidlalo. Siza kuhamba ngokukhawuleza sisazi ukuba umdlalo unenkxaso yabadlali ababini nokunye okunye. Akunakwenzeka ukuba ulahleke, enyanisweni, ukubuyela kwimenyu yokukhetha umdlalo sinokhetho olunye kuphela, sondela kwikhonsoli kwaye ucinezele iqhosha lalo lokuseta kwakhona.
Kubadlali bebhola abaqhelekileyo, bangagcina umdlaloUkwenza oku, kuya kufuneka bacinezele iqhosha «khetha»Naphi na kumdlalo kunye nendawo yokubuyisela iya kuyilwa esinokuyigcina kwimemori yekhonsoli kwaye uyiqale nanini na xa sifuna.
Uluhlu lomdlalo weNintendo Classic Mini NES
ICastlevania II: Ukufuna kukaSimon
Idonki Kong Idonki Kong Jr.
IDAWO YOKUGQIBELA II: ISIVUZO
Punch-Out !! Ukuthandana noMnu Dream
Zelda II: I-Adventure of Link
I-Nintendo Classic Mini NES yile nto iyiyo, ikhonkco elinganiselweyo elijolise ekuhombiseni igumbi lethu lokuhlala ngelixa kwangaxeshanye libhekisa kwimvakalelo yesona sibini siphindwe kabini (isikolo esidala). Ikhonsoli ibiza i-60 euros, ixabiso layo nayiphi na into yokudlala.
Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba ezi ntlobo zemidlalo abayi kuzanelisa iimfuno zincinci okanye ezona zixhaphakileyo zexesha lokudlala, ubunzima yile nto bayiyo, ukufa kuyinto eqhelekileyo kwaye ubunzima bonyuka kancinci kancinci. Kwelinye icala, indinike iiyure ezininzi zokuzonwabisa, kwaye ezo ziseleyo, ngaphambi kwezihloko zesizukulwana esitsha ezifikelele kuthi namhlanje.
Ukuba uyithandile I-Nintendo Classic Mini NES, uyayithanda imidlalo ye-retro kwaye ufuna nokuba nesixhobo esihle nesiluncedo, kuya kufuneka uyithenge.
I-Nintendo yeNES Classic Mini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Sihlalutya iNintendo Classic Mini NES kwaye sikuxelela zonke iinkcukacha [VIDEO]
UJose Ma sitsho
Awukhumbuli ukuba zonke iiwebhusayithi kunye nezimvo zomsebenzisi ziqala njani ngeNintendo mini NES ngenxa yokuba bengakwazanga ukwandisa umxholo wayo? Ngoku kukukhotha nje. Ngamaxesha onke jonga umohluko kwiindaba ukuya kwinyani kamva. Sonke sithetha ngento esingayaziyo kwi-intanethi ukuba kutheni sisohlwaywa ngenxa yokungazi.
I-Acer Jade Primo iyathengiswa kwakhona kwaye ithengiswe kwivenkile kaMicrosoft
Ezi ziindlela ezininzi zokuthintela uKim Dotcom oza kuzithatha kwi Megaupload entsha